Neymar Jr oo doortay kooxda uu filayo in xili ciyaareedkan ay ku guuleysan karto horyaalka Premier League – Gool FM
Neymar Jr oo doortay kooxda uu filayo in xili ciyaareedkan ay ku guuleysan karto horyaalka Premier League
Dajiye September 5, 2018
(PSG) 05 Sab 2018. Laacibka kooxda Paris St Germain iyo xulka qaranka Brazil ee Neymar Jr ayaa u sharaxay in Manchester City ay xili ciyaareedkan difaacan doonto horyaalka Premier League.
Warbaahinta aduunka uu ka mid yahay wargeyska Express Sports ayaa waxay soo bandhigeen fikirka Neymar Jr kaga aadan kooxda xili ciyaareedkan ku guuleysan doonta Premier League, wuxuuna markale u sharaxay in Sky Blues ay ku guuleysan doonto.
“Su’aasha ah cida guuleysan doonta haatan waa mid aad u adag, laakiin waxaan rajeynayaa in Manchester City ay ku guuleysan doonto xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League”.
“Waxaan qabaa in Manchester United ay gali doonto kaalinta labaad, kadib Chelsea ayaa fariisan doonta booska seddexaad, Tottenham ayaana noqon doonta kaalinta 4aad”.
Sheekada cajiibka ayaa ah in kooxda Liverpool oo xili ciyaareedkan ah kooxaha ugu cad cad isla markaana haatan hogaamineysa Premier League uusan kusoo darin Neymar Jr fikirkiisa ku aadan 4-ta kooxood ee kaalmaha sare kaga dhameysan doono dhanka kala sareynta.
“Jose Mourinho marna ma uusan ku fikirin inuu iga fasaxo kooxda Manchester United”… Luke Shaw
Kulamo ka tirsan tartanka degmooyinka oo galabta la ciyaarayo